माओ सुतिरहेको घर - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-10-25 15:32:02
चोकको पूर्वपट्टि चीनको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छ। संयोगले यो पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सङ्ग्रहालय हो। त्यति मात्र होइन, चोकको पश्चिममा रहेको जनवृहत् सभाभवन पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो संसद हो। यो चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको भवन हो, जसलाई चिनियाँ संसद् पनि भनिन्छ।
थिआन आनमन चोकको दक्षिणतिरचाहिँ चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ छन्। हो, माओको निधन भएको ४१ वर्ष भए पनि उनको शव जस्ताको तस्तै राखिएको छ। माओ त्से तुङ तिनै विश्वप्रसिद्ध नेता हुन्, जसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विशाल जनयुद्ध गरेर जनगणतन्त्र चीन बनाए।
नयाँ चीनका संस्थापक नेता माओ त्से तुङ कति वर्षका भए ? यो प्रश्न चिनियाँहरुमा पनि उठ्ने गर्छ। कसैले भन्लान् 'अध्यक्ष माओ ८३ वर्षको उमेरमा मरेका हुन्। उनी मरेको पनि चार दशकभन्दा बढी भयो।' तर चीनमा माओ अझै जीवित छन्। सोमबारबाहेक हरेक दिन हजारौं चिनियाँहरु नेता माओसँग साक्षात्कार गर्छन्। चिनियाँ जनता मात्र होइन, कैयौं विदेशीहरु पनि माओलाई भेट्ने गर्छन्। बिसौं शताब्दीको मध्यदेखि विश्व थर्काउने नेता माओलाई चीनमा अहिले पनि 'अध्यक्ष माओ' भनेर सम्बोधन गरिन्छ।
मृत्यु भएको ४१ वर्ष पूरा हुँदा पनि अध्यक्ष माओ उस्तै छन्, जस्तो सन् १९७६ मा थिए। उनी 'अध्यक्ष माओ स्मारक भवन' मा अहिले पनि सुतिरहेछन्।
माओको जन्म १८९३ डिसेम्बर २६ मा चीनको हुनान प्रान्तको सावोसानमा भएको थियो। उनकै नेतृत्वमा १९४९ अक्टोबर १ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको हो। १९७६ सेप्टेम्बर ९ का दिन बेइजिङमा उनको निधन भयो। निधनपछि पनि माओ त्से तुङको शवलाई सुरक्षित राखेर दैनिक हजारौं मानिसहरु उनको शव अगाडि उभिएर शिर निहुरााउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छन्।
चीन भ्रमणमा आएका प्राय नेपालीको इच्छा पनि माओको शव हेर्ने हुन्छ। शव हेर्नका लागि लामो लाइन बस्नु पर्ने भएकाले समय अभावमा आतिथ्य गर्ने निकायले सबै नेपालीलाई माओको शव देखाएको हुँदैन। चीनमा आएर पनि माओको शव हेर्न नपाएकाहरुको एउटै प्रश्न हुन्छ – साँच्चै लाश नै राखेको हो कि लाशजस्तै बनाएर राखेको हो ? कहाँ नेपालीको मात्र प्रश्न हो र, चीन भ्रमणमा आएका अन्य देशका पर्यटकले पनि यही प्रश्न गर्छन्। कारण स्पष्टै छ – माओका शवका बारेमा अझै पनि रहस्य र जिज्ञाशा धेरै छ।
माओ सन् १९४३ देखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य थिए भने सन् १९४५ देखि जीवनभर उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रहे। तिन दशकभन्दा बढी चीन शक्तिशाली नेता रहेका माओको निधन भए पनि उनको शवलाई सुरक्षित राखेर एक वर्षपछि माओ स्मारक हलमा सारियो, जहाँ आज पनि उनलाई मुद्रामा देख्न पाइन्छ।
माओ स्मारक भवन निर्माणको कथा पनि निकै लामो छ। माओको मृत्यु भएको अढाइ महिनापछि १९७६ नोभेम्बर २४ मा निर्माण सुरू भएको यो भवन १९७७ मे २४ मा पूरा भयो। यसको निर्माणमा चीनका विभिन्न प्रान्तका सात लाख नागरिकले साङ्केतिक रुपमा स्वयंसेवा गरेका थिए। स्मारक भवनमा चीनका विभिन्न प्रान्तका फरक फरक वस्तुहरु प्रयोग भएका छन्। सिचुवान प्रान्तको ग्रेनाइट, क्वाङतोङको पोर्सिलियन माटोको प्लेट, पल्लो सान्सीका सल्लाको काठ, सिन्चियाङको विशेष प्रकारको वनस्पतिको बिउ, थाङसानको माटो, नान्चिङबाट रङ, खुनलुन पहाडबाट सेतो पत्थर, च्यान्सी प्रान्तबाट पाइन लग, ताइवानबाट पानी र बालुवाको नमुना यसमा मिसाइएको छ। अनि सीमामा उभिए पनि नेपालको शान रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट ढुङ्गाको नमुना ल्याई यो भवनमा प्रयोग गरिएको छ। ५७.२ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा विस्तारित माओ स्मारक भवनको मुख्य प्रवेशद्वारको माथिपट्टि सुनौला अक्षरमा टल्किरहेछ- 'अध्यक्ष माओ स्मारक हल।'
हलको उत्तरतिर प्रवेशद्वार छ भने दक्षिणतिर निस्कासन द्वार रहेको छ। भवनमा पस्नासाथ मार्बलबाट बनेको साढे तिन मिटर अग्लो माओको सालिक भेटिन्छ। मध्यभागको हलमा क्रिस्टलभित्र माओको शव छ। छातीसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाले ढाकिएको शव कालो ग्रेनाइटको कफिनमा राखिएको छ। कफिनको चारैतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको चिहृन, चीनको राष्ट्रिय चिहृन, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको चिहृन र माओको जन्म र निधनको तिथिमिति लेखिएको छ। स्मारक भवनको दोस्रो तलामा माओ त्से तुङसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लोकपि्रय नेताहरु चाउ एन लाई, लिउ साओ ची, चु ते, तङ स्याओ फिङ र छनयुनको नाममा स्मृति कोठाहरु रहेका छन्।
माओ स्मृति हलमा प्रवेश निःशुल्क छ। चीनमा मरेका मान्छेको सम्मानमा टोपी झिक्ने चलन भएकाले हलभित्र पस्ता टोपी लगाउन पाइन्न। त्यसै गरी क्यामेरा लान पनि निषेध गरिएको छ। आफूसँग भएको झोला वा कुनै खाद्य पदार्थ पनि भित्र लान पाइन्न। मोबाइल लान पाइन्छ तर भित्र कुरा गर्न पाइन्न।
मङ्गलबारदेखि आइतबारसम्म बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म खुला रहन्छ यो हल। जुलाई र अगस्तमा बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म खुल्ने गर्छ। माओको जन्मदिन डिसेम्बर २६ र मृत्यु भएको दिन सेप्टेम्बर ९ मा चाहिँ थप दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म पनि हल खुल्ने गर्छ। स्मारक भवनमा माओप्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने व्यक्तिहरु अन्य समयभन्दा डिसेम्बर २६ र सेप्टेम्बर ९ मा दशौं गुणा बढी हुन्छन्। त्यसैले पनि यी दुई दिनहरुमा दुई चरणमा स्मारक भवन खुल्ने गरेको हो। यसबाहेक पुर्खा दिवसका दिन पनि माओको शव हेर्ने मानिसको सङ्ख्या अत्यधिक हुन्छ।
चीनमा छिङमिङचे अर्थात् पुर्खा दिवस अपि्रलमा पर्छ। पुर्खा दिवस मरिसकेका अग्रजलाई सम्मान गर्ने दिन हो। सो दिन आˆना पुर्खाको चिहान सफा गरी रङरोगन गरिन्छ। पछिल्लो समय चीनमा शव गाडेर चिहान बनाउने जमिन अभाव हुन थालेपछि जलाउन थालिएको छ। लाश जलाइए पनि अलिकति खरानी भने निश्चित स्थानमा पुरिन्छ र चिहानको प्रतीकको रुपमा स्मरण गरिन्छ।
माओको शव हेर्न चाहने चिनियाँ नागरिकले बिहानै आफ्नो परिचय खुल्ने कार्ड र विदेशी भए राहदानी लिएर लाइनमा बस्नुपर्छ। दैनिक हजारौं मान्छे लाइन लागेर माओको शव हेर्न जाने भएकाले स्मृति भवनभित्र धेरै बेर बस्न पाइन्न।
चीन सरकारको आमन्त्रणमा आएका विदेशी उच्च कूटनीतिज्ञहरुलाई भने विशेष सुविधा उपलब्ध हुन्छ। त्यस्ता विशिष्ट पाहुनालाई भवनभित्र केही समय बस्ने भवनको माथिल्लो तलामा पनि अवलोकन गर्ने अवसर हुन्छ। ती पाहुनाहरुले भवनभित्र माओको सालिकलाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो खिच्न पनि दिइन्छ तर माओको शवको फोटो खिच्नचाहिँ कसैले पाइन्न।
भावनात्मक रुपमा चिनियाँ जनताको मनभरि अझैसम्म जीवित छन् अध्यक्ष माओ। सबै चिनियाँ नागरिक र चीन घुम्न आउने हरेक विदेशीले माओलाई चिन्ने मौका पाएका छन् किनभने चिनियाँ युआनको एकदेखि सयसम्मका नोटमा माओको फोटो हुन्छ।
माओको मृत्यु भएको ४२ वर्ष भइसक्दा पनि शवलाई जस्ताको तस्तै राख्नु चानचुने कुरा होइन। यसरी शव संरक्षण गर्नर् निकै खर्चिलो पनि छ। विशेष रासायानिक तत्व राख्नुपर्ने र यसको सुरक्षामा उच्च ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
८३ वर्षमा मरेका माओ अहिले पनि ८३ वर्षकै छन्। अरु मानिसहरुको उमेर बढ्दै जाँदा शरीर वृद्ध हुँदै जान्छ तर माओ सधैं ८३ वर्षकै उमेरमा सुतिरहेका छन्।
साभारः अनलाइन खबर डट कम।